Sheekada filimka Aravindha Sametha: NTR wuxuu la yimid filim Action qiiro badan oo aad u xiiso badan – Filimside.net
Sheekada filimka Aravindha Sametha: NTR wuxuu la yimid filim Action qiiro badan oo aad u xiiso badan
Maxaa ka xiiso badan haddii aad isku heshid filim Action qiiro badan hogaamiyana ka yahay Superstar-ka awooda badan ee aan dagaalka ka daalin Jr NTR oo loo yaqaan Young Tiger ama Tarak caan ku ah!
Jilaayaasha filimka Aravindha Sametha: NTR, Pooja Hegde, Eesha Rebba, Jagapathi Babu, Naga Babu, Naveen Chandra, Sunil, Eeshwari Rao, Srinivasa Reddy.
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 42-daqiiqo
Qiimeyntiisa sheekada filimkan: 3.5/5 (Sedex xidig iyo bar)
Fariinta Filimka Aravindha Sametha: Waxaa jirto tuulo dagaal hareeyay oo lagu magacaabo Kommaddi waxaana marwalbo isku dhibaateen labo kooxood oo hogaanka siyaasada degaankan isku heestaan inay wada hadlaan waxay ka jecel yihiin seefahooda inay dhiig isaga daadiyaan!
Xaafada Kommaddi labada koox ee taladeeda isku heesato waxaa kala hogaamiyaan Narappa Reddy (Naga Babu) iyo Basi Reddy (Jagapathi Babu).
Tuulada colaada hareesay waxaa dib ugu soo laabanayo wiilka asigo yar goobta ka tagay Veera Raghava (Jr NTR) sidoo kalena wax badan makala socdo in aabihiis Narappa Reddy (Naga Babu) uu dagaal kala dhaxeeyo Basi Reddy (Jagapathi Babu) sidaa darteed xaalad uusan ogeyn ayuu dhexda kaga soo dhacaa.
Veera Raghava (Jr NTR) wuxuu qaadanaa nabada mana jeclo colaada sidaa darteed wuxuu isku dayaa aabihiis iyo dadka ay is hayaan inuu heshiiyo laakiin nasiib daro Veera Raghava (Jr NTR) aabihiis Narappa Reddy (Naga Babu) ayaaba la dilaa waxaana dilkaas ka dambeeyo Basi Reddy (Jagapathi Babu) sidoo kalena Veera Raghava (Jr NTR) dhaawac dhimasho ku dhow ayaa loo geesanaa balse wuu ka bad baadaa asigoo cagta marinaayo kuwii ka dambeeyay dilka aabihiis.
Kadib Veera Raghava (Jr NTR) ayeydiis ayaa ka codsaneyso inuu tuulada isaga tago nolol kale Hyderabad ka bilaawdo wuxuuna qaadanaa taladdii ayeydiis.
Veera Raghava (Jr NTR) marka uu Hyderabad tago wuxuu jaceyl la wadaagaa gabadha ardayada ah Aravindha (Pooja Hegde) kadibna nolol xasiloon ayuu dhexda ka galaa. Laakiin kuwii uu tuulada kaga soo tagay kama harayaan waxayna isku dayayaan inay isaga dhibaateeyaan.
Veera Raghava (Jr NTR) wuxuu ogaanaa in Basi Reddy (Jagapathi Babu) uu nool yahay sidoo kalena uu ka bad baaday dhibkii u geestay sheekadana waxay noqoneysaa qeybaha dambe Basi Reddy (Jagapathi Babu) oo rabo inuu Veera Raghava (Jr NTR) dhibaateeyo iyo Veera Raghava (Jr NTR) oo go’aan ku gaarayo markale inuu Veera Raghava (Jr NTR) ka taqaluso.
Maxaa Laga Yiri Fariinka Filimkan: Ruug cadaa Trivikram Srinivas wuxuu la yimid filim Action qiiro badan una dheer tahay fariinta arimaha qoyska oo aar gudasho lagu kaabay wuxuuna u dhigay hab wacan oo daawashadiisa laga xiiso dhigeyn waa hubaal qof walbo oo jecel aflaanta Action-ka qiirada badan inay ka heli doonaan madaama qaab wacan mashruucan la isugu daba riday.
Bandhiga Jilaayaasha: NTR wuxuu la yimid bandhigiisii ugu wacnaa ebid indhahiisa ayaaba ficil bixinayaan iskaba dhaf gacantiisa iyo hadaladiisa kani waa Super star Telugu heer sare gaarsiiyay sameynta dhanka filimada Action-ka ee qiirada badan weliba Afar Action oo kala duwan oo uu filimkan ku saamenayo waqtiyo kala duwan xasuus weyn ayay kugu reebi doonaan.
Jagapathi Babu iyo doorkiisa laadarka kartida badan waa mid filimkan xiiso u yeelayo daawashadiisa weliba sida ay isaga iyo NTR u xifaaltamayaan waa hab Classic ah.
Pooja Hegde atirishadan door wacan ayaa si lama filaan ah filimkan looga siiyay sidoo kale Naga Babu oo isagana NTR aabihiis filimkan ku jilaayo doorkiisa waa mid adag oo saameyn xoogan leh.
Gunaanad: Bandhiga NTR, qaabka sheekada Director Trivikram isugu daba riday, Action-kiisa dareenka qiirada badan ayaa sababi doonto in filimka Aravindha Sametha uu noqdo Hit weyn sidoo kalena dhul weynaha Telugu wacdaro lixaad leh ka dhigo.
Fadlan hoos ka daawo gooska filimka Aravindha Sametha:
Waxaa Aqrisay 1,027